बिक्री को लागी सफाई | फ्रेंचाइजी अवसरहरू Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»मिश्र»फ्रन्चाइजी सफा गर्दै
फिचर्ड क्लीनिंग फ्रेंचाइजीहरू
पछिल्लो सफाई फ्रन्चाइजीहरू
काल्पनिक सेवा मताधिकार
काल्पनिक सेवाहरूमा सम्मिलित हुनुहोस् र तपाईंको रोजाईको क्षेत्रमा घर-मर्मत सम्बन्धी व्यवसाय सुरू गर्नुहोस् Fantastic Services एक ग्लोबल कम्पनी हो, ...
ब्रू फ्रन्चाइज खाली गर्नुहोस्
२०० 2006 पछि बियर लाइनहरू सफा गर्दै हाम्रो प्रयास गरिएको र परीक्षण गरिएका विधिहरू, साथै हाम्रो अनौंठो पोर्टेबल, पानी-मिसाउने मिक्सिंग एकाइहरू, ...
टेकलेनले १ 1983 XNUMX मा व्यापार सुरू गरे र बेलायतको प्रणाली स्वच्छतामा अग्रणी विशेषज्ञहरू भएका छन्। टेकलेन सजिलै घरको रूपमा समायोजन गर्न सकिन्छ ...
आजका धेरै मानिसहरू ईन्टाफोबिक छन् र यसैले सफाई सेवाहरूको माग प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ। त्यसोभए तपाईं आफैलाई सोच्दै हुनुहुन्छ कि यो द्रुत रूपमा बढिरहेको उद्योगमा किन सम्मिलित हुनुहुन्न?
सफाई उद्योग को आसपास तथ्या around्क।
अब म अघिल्ला वर्षहरुमा सफाई उद्योगको वरिपरि स some्कलन गरेको केहि तथ्या .्कहरु साझेदारी गर्नेछु कि यो देखिनको लागि यो एक धेरै राम्रो उद्योगमा संलग्न हुनुपर्दछ।
२०१० देखि सफाई क्षेत्रले युकेमा २१% कारोबार बढेको छ जुन विश्वव्यापी रूपमा लगातार छ।
बेलायतको सफाई क्षेत्रले 700,000००,००० मानिसहरूलाई काममा लगाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा there.२ मिलियन भन्दा बढी मानिस सफाई क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, र विश्वव्यापी सफाई सेवाको माग ठूलो छ।
एमटीडब्ल्यू अनुसंधानको एक रिपोर्ट अनुसार ठेक्का सफाई क्षेत्र बेलायतको अर्थतन्त्रलाईbn बिलियन भन्दा बढीको छ।
सफाई संसारका सबै देशहरूमा सँधै उच्च मागको हुनेछ। यो एक क्षेत्र हो जुन कहिले मर्दैन।
यी तथ्या ?्कहरूले के देखाउँछन्?
यो स्पष्ट छ कि सफाई सेवाहरूको लागि केवल धेरै बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र होइन तर सम्पूर्ण विश्वभरि नै उच्च माग छ। टेक्लेन जस्ता कम्प्युटर सफाई फ्रन्चाइजीहरू, घरेलु र कार्यालय सफा गर्ने सेवाहरू हुन, यो आकर्षक बजारको फाइदा लिन अब सही समय हो।
आज फ्रान्चाइजीक प्रयोग गरेर सफा फ्रेंचाइजीहरू ब्राउज गर्नुहोस्।
यदि तपाईं उत्तम ग्लोबल सफाई फ्रेंचाइजी अवसरहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसो भए म तपाईलाई सल्लाह दिन्छु कि तपाईले हाम्रो सफाई फ्रान्चाइजी कोटि बाट राम्रो अनुसन्धान गर्नुभयो तपाईलाई बेच्न मिल्ने बिक्रीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक यदि तपाईं सफाई उद्योगको प्रशंसक हुनुहुन्न भने यसको अघिल्ला बर्षहरूमा यसको तीव्र वृद्धि भए पनि। त्यसो भए मँ सिफारिस गर्दछु कि तपाई फ्रन्चाइजेकको सम्पूर्ण फ्रन्चाइजी डाइरेक्टरी मार्फत ब्राउज गर्नुहोस् रमाईलो विविधताका अवसर प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।